Kungase kulahleke imisebenzi, kuwe nezimboni ngenxa yeholo eliphansi | News24
Kungase kulahleke imisebenzi, kuwe nezimboni ngenxa yeholo eliphansi
ININGIZIMU Afrika izoqalisa ukusebenza komgomo wokuthi kungabi khona umsebenzi wakuleli ozoholelwa imali engaphansi kuka-R20.00 ngehora ngosuku lwabasebenzi lwangonyaka ozayo. Kodwa-ke kusenemibuzo ngokuthi ngabe lokhu ukunqoba yini kubasebenzi bakuleli abahlwempu.
Uma kungukuthi izinto ziyaqhubeka nokwenzeka ngendlela esijwayelekile, uphenyo olwenziwe ngongoti, bezomthetho lukhombisa ukuthi lokhu kungabazusiza abanye babasebenzi. Kodwa-ke abanye, ikakhulukazi labo abasebenzela izinkampani ezincane nabasezindaweni zasemakhaya, angeke kubasize lokhu.
Lokhu kungenxa yobungozi bokulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yaleli holo eliphansi (minimum wage) okungafanele kube khona umsebenzi ozohola ngaphansi kwalo.
Yize noma lo mgomo ungababandakanyi abaqashi abancane, kodwa uzozikhahlameza izinkampani ezisezindaweni zasemakhaya.
Uphenyo luveza ukuthi kwalahleka inqwaba yemisebenzi ezindaweni zasemakhaya nemuva kokuqaliswa kokusebenza kweholo eliphansi ngonyaka ka-2003 nalapho kwacekeleka phansi inqwaba yemisebenzi yasemapulazini asemakhaya.
Ngaphezu kwalokho kuqagulwa ukuthi kusenokwenzeka iningi labasebenzi liqhubeke nokukhokhelwa amaholo angaphansi kwadingekayo ukuze umuntu aphume ezingeni elithathwa njengelobubha.
Kunokwesabela ukuthi ukuqaliswa kwalo mgomo weholo eliphansi ngonyaka ka-2018 kungase kwenze isimo sibe sibi kakhulu ekuswelekeni kwemisebenzi kuleli njengoba izinga livele liphezulu, nokungagcina sekwehlisa izinga lempilo.